CFA VS. CPA - Nke Asambodo bụ Better? [It's a Close Call]
CFA vs CPA: Nke bụ Best maka Ị?
23 Aug CFA vs CPA: Nke bụ Best maka Ị?
Ọkachamara na ego mgbe achụso ọkachamara iru eru iji ọganihu ha ọrụ. Gbaara Public ego (CPA) na Chartered Financial Analyst (CFA) bụ debatably abụọ kasị prestigious utu aha na ha n'ubi. Gịnị bụ ihe dị iche na, na nke na otu onye bụ mma? The isi dị iche n'etiti abụọ bụ ihe onye ọ bụla na ọnọdụ na-ekpuchi na ọrụ ohere. CPA-atụle ga-"nwa belt na-aza ajụjụ" na-akwadebe gị maka ọrụ na Accounting na auditing, ebe, CFA Program focusses na Investment Management ekpuchi sara mbara isiokwu dị ka Corporate Finance, Pọtụfoliyo Management, nkwekọrịta, ofu Income, Alternative Investments na-akwadebe gị maka ọrụ na Investment Banking, Pọtụfoliyo Management, Financial Research etc. Kama arịọ ajụjụ a na "nke dị mma?", ị kwesịrị ị na-arịọ "nke bụ ka mma ka ị".
Gịnị bụ a CFA?
CFA vs CPA: The Ngwa
CFA ma ọ bụ CPA: Exam Content na Format
Ya mere, Nke dị mma?
A CPA bụ a designation nke na-abụghị ọha accountants, tax accountants, na ego ọkachamara na-achọ a aha na-egosi na ha ọnụ ọgụgụ crunching nka. A CPA nwekwara statutory ikike banye oditi akụkọ nke na-eme ka aha pụrụ iche. Dị ka AICPA, CPAs Olee ihe enyemaka irite 10-15% ọzọ mgbe ha na-amalite na-arụ ọrụ tụnyere ndị na-abụghị credentialed accountants. Ọzọkwa CPAs bụ ihe mara mma na-ewe mmadụ n'ọrụ karịa ndị na-abụghị CPAs. Dị ka U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), ego na auditor occupations, nke na-agụnye CPA si n'etiti ndị ọzọ ajụjụ ndị ọkachamara, na-arụ ọrụ na-eto eto site na 13 percent n'etiti 2012 na 2022.
The CFA aha bụ gold ọkọlọtọ na ego na ego. Ọ bụrụ na ị na-achọ a ọrụ dị ka hara nhatanha nnyocha, enweta ego oru, na ndị ọkachamara na akpan owo management ma ọ bụ oke ego ụlọ, nke a bụ ihe kasị mma na aha ị nwere ike nweta. CFAs-elekwasị anya na ego management.
The top n'ọrụ nke CFAs gụnyere kacha akwanyere ùgwù ego corporations na ụwa, dị ka, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, na Wells Fargo.
Ọtụtụ n'ime ndị a na-ego anoghi n'ulo oba, ma CFA Program-akarị nke ahụ n'ime ihe ọmụma na nkà kasị mkpa ka ndị zuru ụwa ọnụ ego management ọrụ si ele ihe anya nke a eme.
The eligibility ibiere maka CPA aha bụ ndị kasị elu n'etiti niile ego metụtara iru eru. Ị ga dịkarịa ala a 4-afọ okokporo ogo na ọtụtụ ikpe, 150 kaadị awa (Ẹkot 5 afọ agụmakwụkwọ ka elu) nọdụ maka udomo oro. The CPA ikikere ka akwadoro site ọ bụla nke 55 na-ekwu ma ọ bụ ikike na United States. N'ihi na elu mgbochi nke ntinye na mgbagwoju anya ngwa usoro, ọ bụ nnọọ ihe a aka usoro. The CFA bụ a designation nyere site CFA Institute, a zuru ụwa ọnụ na-abụghị uru nzukọ. Na ulo akwukwo dabeere na US, ma e nwere 3 mpaghara itieutom na 200 local chapters around the world. Ị nwere ike ide site na ulo akwukwo na ngwa dịtụ mfe. Dị ka ogologo dị ka i nwere a okokporo ogo (ọ bụchaghị 4 afọ), i nwere ike na-anọdụ maka udomo oro. Ị pụrụ ọbụna na-udomo oro tupu agụsị
The CPA Exam nwere 4 udomo oro ngalaba: Financial Accounting & akuko, oditi & àmà, Regulation na Business Environment & Concepts. The udomo oro bụ 100% kọmputa esịnede multiple nhọrọ ajụjụ, ozi dabeere na anwale (ikpe ọmụmụ), na dere na nkwukọrịta. Ị nwere ike ịhọrọ na- 4 akụkụ otu otu, 2 na a oge, ma ọ bụ ọbụna 4 n'otu oge ahụ. I nwere ike na-anọdụ maka udomo oro ọ bụla na CPA udomo oro testing window, nke bụ ihe mbụ 2 ọnwa nke ọ bụla nkeji iri na ise na mgbe ọ bụla prometric emmepe ofụri US. A na-anwale emmepe na Japan, Brazil na 4 Middle Eastern mba.
Kasị ala mbadamba achọ gburugburu 1 afọ nke ajụjụ ahụmahụ tupu na-ikike, na n'ihi na ọtụtụ na-ekwu, nke a ahụmahụ na-chịkwara na kwupụtara site ifịk CPA.
The CFA udomo oro format nnọọ obere mgbanwe. Enwere 3 etoju nke udomo oro, na mkpa ka ị mezue ha kwesịrị ekwesị iji ịga na na na-esonụ. The udomo oro na-lekwasịrị anya ego analysis na Pọtụfoliyo management kama ajụjụ, oditi na ụtụ isi. Ule na-ndinọ ugboro abụọ n'afọ maka Ọkwa 1, na otu ugboro n'afọ maka Ọkwa 2 na 3. E nwere ọtụtụ mba ule maka CFA udomo oro na isi obodo mepere emepe. Ọ bụ ezie na e nyochawa i nwere ike mezue CFA udomo oro n'ime 18 ọnwa (Ọkwa 1 na December, Ọkwa 2 na June, Ọkwa 3 na June afọ mgbe), kasị aga ime iri 4 afọ mezue ule. Ọ na-ewe ogologo oge na-a CFA karịa a CPA. Ị na-achọrọ nwere 4 afọ nke mkpa ahụmahụ na-CFA designation. Your nlekọta, na-ga-verifying gị ahụmahụ, na-adịghị mkpa na-a CFA.
Mgbe ị na-ekpebi ma hà ga-aga n'ihi na CFA ma ọ bụ CPA, na mbụ ihe ị chọrọ na-eche banyere bụ gị ọrụ. E wezụga nke ahụ, na CPA aha nwere ihe restrictive mmụta na ahụmahụ chọrọ, ma mgbe ị na-ruo eruo, usoro bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa. CFA nwere ala entry mgbochi ma ọ na-ewe ogologo oge oge iji wuchaa. The mkpebi n'etiti abụọ ndị a bụ n'ikpeazụ ruo gị na ọrụ ihe mgbaru ọsọ. Malitere na na kacha mma CPA Review Course ma ọ bụ find the best CFA Study Materials
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount, Deep Discount 40 eji taa
ikpeazụ eji 7 nkeji gara aga
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 37 eji taa
ikpeazụ eji 34 nkeji gara aga
CPA, Wiley CPAexcel, nanị Discount 37 eji taa
ikpeazụ eji 3 nkeji gara aga
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 34 eji taa
CPA, Wiley CPAexcel, Special Nye 35 eji taa
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount 33 eji taa
ikpeazụ eji 10 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 21, 2018
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 38 eji taa
CPA, nanị Discount, Fast Forward Academy 38 eji taa
ikpeazụ eji 12 nkeji gara aga
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 35 eji taa
ikpeazụ eji 8 nkeji gara aga
ikpeazụ eji 11 nkeji gara aga
CPA, Gryfina, nanị Discount 39 eji taa
CPA, Gleim CPA Review, nanị Discount 35 eji taa
CPA, Wiley CPAexcel, nanị Discount 34 eji taa
ikpeazụ eji 14 nkeji gara aga
CPA, Roger CPA Review, Financing Nye 33 eji taa
ikpeazụ eji 19 nkeji gara aga
CPA, Surgent CPA Review, Financing Nye 37 eji taa
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 39 eji taa
ikpeazụ eji 7 sekọnd ago
CPA, Roger CPA Review, ọzọ 33 eji taa
CPA, Wiley CPAexcel, ọzọ 40 eji taa